सन्दर्भ मानसिक स्वास्थ्य दिवस: ‘सबै खाले मानसिक रोगको उपचार हुन्छ’ :: सुजिता कार्की :: Setopati
सन्दर्भ मानसिक स्वास्थ्य दिवस: ‘सबै खाले मानसिक रोगको उपचार हुन्छ’
डा.प्रदिप पाण्डे (नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ)
मानसिक तनावका कारण मानिसलाई थुप्रै रोगहरू लाग्न सक्छ। डिप्रेसन, निराशापन, एन्जाइटिक डिसअर्डर, छटपटीको समस्या, त्यस्तै गरेर अनिन्द्राको समस्या हुन्छ। तनावमा मानिसहरूलेले रक्सी, गाजा, विभिन्न खालका ट्याब्लेटसमेत प्रयोग गर्छन्। धेरै तनाव भयो भने कहिलेकाही रक्सी खानेले पनि धेरै खान्छ। जस्तै भूकम्पका कारणले आफ्नो घर भत्कियो। अब बनाउने उपाए छैन त्यसले गर्दा कतिपय मानिसलाई तनाव भइरहेको छ। त्यस्तै पागलपनको समस्या पनि तनावकै कारण हुन्छ। टाउको दुख्ने समस्या अर्को समस्या हो। अलिकति तनाव भयो टाउको दुखिहाल्ने समस्या पनि हुन्छ कतिपयलाई।
दिक्क लाग्ने नरमाइलो लाग्ने, निराश हुने छटपटी हुने, अत्यास लाग्ने ढुकढुकी बढ्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई मुटुकै समस्या भयो कि मलाई भन्ने पनि हुन्छ। डर लाग्ने, पेट पोलेको जस्तो हुने हुन्छ। कतिपयलाई ‘स्ट्रेस’ को कारणले ग्याष्ट्रिकको समस्यासमेत हुन्छ।
ग्याष्ट्रिकको अौषधी खाएको छ, तर पेटको समस्या समाधान भएको छैन। दिसा कहिले ढिलो हुने कहिले चाँडो हुने भएको छ। हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, कहिले यता दुखे जस्तो कहिले उता दुखेजस्तो लाग्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा जचाउँन गयो रिपोर्टमा केही पनि आउँदैन। यो सबै तनावका कारणले हुन्छ।
शंका लाग्ने, मलाई केही भयो कि भन्ने खालका महसुस हुने हुन्छ । रक्सी चुरोट गाँजा लगायतका कुलतमा फस्ने पनि हुन्छ।
मानसिक तनावबाट बच्न दुई वटा उपाय छन्। एउटा यसबाट कसरी जोगिने र अर्को यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने हो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । जसरी शरीर स्वस्थ्य राख्न हामी व्यायाम गर्छौ। त्यसैगरी मनको स्वस्थताका लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो। आफ्नो विचारलाई कसरी स्वस्थ्य राख्ने? विचार कतातिर गइरहेको छ। म आज कस्तो छु? मेरो सोचाई कस्तो छ? म स्वस्थ्य छु कि छैन? आज म खुसी छु कि छैन? अलि बढी तनावमा पो छु कि यस्ता कुरा बेलाबेलामा जाच्नुपर्छ।
पारिवारिक तनाव हो कि, व्यवसायिक तनाव हो कि, जागिरको तनाव हो कि यसलाई पत्ता लगाउनुपर्छ। कसैले मलाई आलोचना गर्‍यो मैले माफी नदिएको हो कि जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
त्यो बाहेक निन्द्राको व्यवस्थापन, खानाको व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ। बेलाबेलामा मनोरञ्जन आवश्यक छ।
आफूले आफूलाई स्वस्थ्य र बलियो बनाउन मैले कुनै रमाइलो र खुसी हुने काम गरेको छु कि छैन भनेर आफूले आफैँलाई जाच्नुपर्छ। आफ्नो सबैभन्दा ठूलो डाक्टर आफैँ हो। त्यसैले मानिसले आफ्नो तनावको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ।
आधुनिकताले गर्दा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भएको छ। दिनरात काम गर्ने गर्नाले एक दिन पनि मानिसलाई फुर्सद छैन। राति ‘डियूटी’ गर्नेहरूलाई अझै बढी मानसिक तनावको समस्या हुन्छ।
बेलाबेलामा साथीभाई, आफन्तसँग घुम्ने रमाइलो गर्ने गर्नुपर्छ। बिदाको दिनमा आफ्नो कामको तनाव लिनु हुँदैन। आफ्नो विचारलाई बेलाबेलामा जाँच गर्नुपर्छ। यस्ता कुरालाई ध्यान दिने हो भने हामी एन्जाइटी, डिप्रेसनलगायतका समस्याबाट सजिलै बच्न सक्छौ।
यस्तो रोग नै लाग्यो भने मानसिक रोग विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ। मनोवैज्ञानिकहरूसँग समेत छलफल गर्नुपर्छ। मैले चाहँदा चाहँदै पनि तनाव नियन्त्रण गर्न सकिनँ भन्ने भयो भने त्यतिबेला विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। सुरूमा ‘काउन्सिलङ’ बाट हेर्ने त्यति गर्दा पनि भएन भने औषधीको साहरा लिनुपर्छ।
सुरूवाती चरणमा बिरामी आयो भने आठ, दश दिन औषधी खाएमा ठीक हुन्छ। अलि धेरै समयमदेखि तनाव दिएको छ भने एक महिनादेखि ६ महिनासम्म पनि खानुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म पनि औषधी लिनुपर्ने हुन्छ। तर, सामान्यत: एन्जाइटी र डिप्रेशनको लागि ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म औषधी खाएमा निको हुन्छ। सबै खाले मानसिक रोगको औषधीबाट निको हुन्छ।
मानसिक समस्यालाई लुकाउने दबाउने चलन छ। डाक्टरकोमा गयो भने पनि यो त मानसिक डाक्टर भेट्न गयो यसलाई के भयो ?भनेर हेर्ने चलन छ। त्यो बिल्कुलै गलत काम हो । मानसिक डाक्टरलाई समेत यो आफैं पागल भयो कि भन्ने सम्मको आशंका गर्ने गरिन्छ।
यो रोग होइन यो त मान्छे कमजोर भएर हो। डिप्रेशन कसरी रोग हुन सक्छ यो आफैँ ठीक हुन्छ भनेर परिवारले भन्दै जाँदा बिरामीले आत्महत्या सम्म गर्न सक्छ। यसलाई सुरूमा नै ध्यान दिनपर्छ। कहिलेसम्म यसलाई लुकाएर राख्ने? समस्या परिसकेपछि मात्रै सचेतता अपनाउने हाम्रो परम्परालाई बदल्नुपर्छ। योसँगै बिरामीले पनि मैले डाक्टरको सहयोग लिनुपर्छ लिए भने मात्रै मेरो समस्या ठीक हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ।
म समाजको कुरा सुन्दिनँ, म अरूको कुरा सुन्दिनँ मलाई समस्या छ। म डाक्टरसँग सल्लाह लिन जान्छु भनेर बिरामीले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ।
यो रोगीको संख्या यतिनै छ भनेर भन्न त सकिदैन। तर, विश्वमा बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतलाई कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या रहेको हुनसक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। तर, नेपालमा यति नै छ भनेर कुनै पनि खालको डाटा अहिलेसम्म निस्किएको छैन र यसको अनुसन्धान पनि भएको छैन। तर, यी सबै समस्याका बिरामी विशेषज्ञसँग सल्लाह लिन आइपुगेका हुँदैनन्। नेपालमा जस्तै विश्वभर नै यसलाई लुकाउने चलन छ। जुन गलत हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २४, २०७४, १२:३०:१४
सुर्खेतमा बन्यो १७ शैयाको फिस्टुला केन्द्र
अल्जाइमर्स रोग के हो ?
नोबेलको स्वास्थ्य शिविरमा ३५ सय बिरामीको निःशुल्क उपचार
टेष्ट ट्युव बेबी गर्दा प्राय: बच्चा किन जुम्ल्याहा जन्मिन्छ ?
बेवारिसे बिरामी बृद्धको डक्टर शर्माद्वारा उद्धार, नोबेलमा उपचार हुँदै
कानेपोखरीमा नोबेलको शिविरबाट पाँच सय बिरामीको निःशुल्क उपचार